adCenter maka Adsense ... nke a enweghị ike ịdị mma | Martech Zone
Wednesday, December 13, 2006 Monday, August 24, 2009 Douglas Karr
Enwere m ezigbo ihe na-aga n'ihu Payraise mgbako. Ebe nrụọrụ ahụ nwere nleta dị ala, mana nnukwu mgbasa ozi CTR ya na Google Adsense. Ọ bụ ihe ọ bụla na m ga-ala ezumike nká ma saịtị ahụ nwere oke oke nke 200% kwadoro. (Ọ na - ejukarị m anya ma m ga - arụ ọrụ na iwuru otu puku puku ihe ntanetị ntanetị na Adsense… nke nwere ike ịbụ ego edozi!)
Yesnyaahụ, m debanyere aha maka azụmahịa na Microsoft adCenter ma jiri ya nweta $ 200 maka mgbasa ozi n'efu. Agụrụ m site na Ajụjụ na Usoro Ojiji ma ọ sụghị, n'ụzọ ọ bụla, na ọ ga-abụ iwu na-akwadoghị iji mgbasa ozi ahụ iji chụpụ okporo ụzọ gaa na weebụsaịtị ọzọ, ebe arụnyere Google Adsense.
Nke ahụ bụ ihe m mere. M debara aha, melite a $ 200 mmefu ego na gwara ya na-agba ọsọ ruo mgbe depleted. Nke ahụ $ 200 ga-enweta Calculator Payraise edepụtara na nsonaazụ ọchụchọ akwụ ụgwọ na ọnọdụ # 1 maka isiokwu 4 ahọpụtara m. A ga-akpụrụ ndị ahụ gaa na Calculator Payraise ebe ha ga-ezute na njikọ Adsense ndị ọzọ. N'iji CTR m, m ga-eme n'etiti $ 10 na $ 20.
Otu onye kwụrụ maka nke ahụ! Ekwetaghị m na emere m ihe ọ bụla nke a ga-ahụta na ekwesighi maka onye mgbasa ozi ahụ, mana ọ na-adị m ka m ruru unyi. Ahụla m usoro a nke ndị na-eme ihe nchịkọta na-eji eme ihe. Ha na-arata njikọ ha na-akwụ obere ụgwọ iji kpọga gị na saịtị ebe ndị mgbasa ozi ziri ezi nwere CTR dị elu karịa. Yabụ na mgbakọ na mwepụ na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịkwado CTR zuru oke na mgbasa ozi ndị ahụ. Ndị nchịkọta na-abụkarị n'ime ya maka ego naanị, n'agbanyeghị. Saịtị ahụ anaghị enwe ọdịnaya ọ bụla. N'aka nke ọzọ, Payraise Calculator bụ saịtị dị mma yana ọdịnaya yana ngwa ọrụ ndị ọbịa ji.
Ọ dị njọ? Ma ọ bụ ọ bụ otu ihe ahụ dị ka a ga - asị na m nwetara ụfọdụ azụmaahịa na $ 200 ahụ?
Mara: Emere m nke a dị ka nnwale iji tụnyere ọnụego nzaghachi na iji nwalee sistemụ ahụ. Ọ bụrụ na nke a bụ, n'ezie, ezighi ezi - biko mee ka m mara.
Dec 25, 2006 na 7:39 PM
IMHO, ebe ọ bụ na, “Payraise Calculator bụ saịtị dị mma yana ọdịnaya yana ngwa ọrụ maka ndị ọbịa iji…”, ihe niile ị na-eme bụ ịkwado ịkpa agwa. Ọ gwụla ma enwere iwu a kapịrị ọnụ megide ya, mee ya ọzọ. Ka emechara, ị na-ekwu mmetụta na akpaaka.
Dec 25, 2006 na 9:06 PM
Daalụ, Vince! Onu ogugu na nke a bu ihe dika $ 50.